WAX KA OGOW: Micnaha shaabaddiisa, sababta uu u xirtay lambarka 18-aad ee Man United & xiriirka ka dhexeeya Bruno Fernandes iyo lambarka siddeed(8) – Gool FM
WAX KA OGOW: Micnaha shaabaddiisa, sababta uu u xirtay lambarka 18-aad ee Man United & xiriirka ka dhexeeya Bruno Fernandes iyo lambarka siddeed(8)
(Manchester) 06 Jan 2021. Laacibka kooxda Manchester United ee Bruno Fernandes ayaa soo caga dhigtay dalka Ingiriiska bishii January ee 2020, waxaana markaas uu xirtay lambarka 18-aad ee maaliyadda naadiga.
Balse waxaa jirta in lambarkaas uusan ahayn dooqiisa koowaad, taas baddelkeedna uu jeclaa lambarka 8-aad ee kooxda.
In aabbihii uu xiran jiray lambarka siddeedaad (8) markii uu ciyaaryahanka ahaa iyo in isagu uu dhashay bil mareysa taariikh siddeed ah – 8-da bisha September – waxay udub dhexaad u yihiin jaceylka uu u qabo lambarkaas, waana sababta ay iyadoo shaabad ah ugu sawiran tahay gacantiisa midig.
Markii uu kusoo biiray Red Devils, ma uusan heli karin lambarka uu jecelyahay ee Siddeed (8), maadaama uu Juan Mata oo sanado badan ku sugan Old Trafford uu xirto.
Bruno Fernandes ayaa xirtay lambarka 18 ee maaliyadda Manchester United markii uu heli waayay lambarka 8-aad, waxaana uu ku doortay sida uu sheegay laba arrin.
Tan koowaad waxa uu ku micneeyay in taariikhda ay dhalatay xaaskiisa ku asteysan tahay bil 18 ah, halka sababta labaadna uu ku sheegay inuu daawan jiray Paul Scholes oo lambarkaas u xiran Man United waqti ciyaareedkiisii.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa la saadaalinayaa in Juan Mata uu xilliyada dhow ka tagi doono Masxraxa Riyada, taasna ay Bruno siineyso fursad uu ku xirto lambarkii uu jeclaa ee siddeed.
Manchester City oo xaqiijisay saddex kiis oo cusub oo la xiriira Korona Fayras